विकास निर्माणमा अदुरदर्शिताको पराकाष्ठा
सुरक्षा - अपराध
शनिवार, फाल्गुन ११, २०७५ ०२:३०:१५
मगलवार, भदौ २६, २०७५ लुना पाैल
हामी सबै डुवान भएपछि मात्रै हल्लाखल्ला गर्ने गर्छौ । वास्तवमा हाम्रो पूर्वाधार निर्माणका क्रममा गरेका त्रुटीहरुको कारण नै अहिलेको समस्याको जड तथा परिणाम हो । जस्तो कि ढल राख्ने वेलामा सानो राख्ने तर अहिले आएर सानो भयो । खोलाको किनार मिचेर सडक घर निर्माण गरियो अहिले समस्या भयो । त्यसैले दीर्घकालिन हुनु पर्यो भनेको हो ।
ठूला राजमार्गहरु बाहेकका अरु ससाना सडकबाट २६ टनका ट्रकहरु प्रवेश गर्छन् र गराउँछन् । तर, त्यो अत्यधिक भारवहन गर्न सक्ने क्षमता भएका सडक अहिले हामी कहाँ निर्माण भई सकेका छैनन् । २२ टनको लोडरले सडक कालो पत्रे गर्दा पुतलीसडक जस्तो ठाउँमा पनि घरहरु थर्किने गर्दछ । हामीले गतवर्ष नै अर्थमन्त्रालयसँग भन्यौ कि राजधानी छिर्ने हरेक नाकाहरुमा ट्रक पार्क गरौं । त्यही पार्कमा सामानहरु अनलोड गराएर मात्रै साना गाडीमार्फत उपत्यकाभित्र सामान ढुवानी गरौ । तर, हामीले कार्ययोजना बनाउँन पाएनौ ।
त्यसवेलामा निर्वाचन आचासंहिता लाग्यो । बजेट समयमा आएन र अध्ययन पनि हुन सकेन । मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट विनियोजन चैत्र महिनाभित्रैमा हुनुपथ्र्यो । हामी कार्यक्रम स्वीकृति हुन्छ भन्नेमा पक्षमा आश्वस्त थियौ । यो वर्ष पनि बजेटमा त्यो कुरा छुट्यो । यस्तो जेलिएको अवस्थामा म विकास निर्माण गर्छु भन्दापनि गर्न नपाउँने अवस्था छ ।
यद्यपि अर्थमन्त्रालय अहिले सकारात्मक छ । बजेट विनियोजनको काम अगाडि वढेको छ । राजधानीको सामान्य नागरिकको हैसियतले हेर्दा सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित भनिएका बस्तीहरु नै चरम डुवानमा परेका छन् । विद्यालय गएका विद्यार्थी केटाकेटीहरु वेलुका घरमा सकुशल आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिन्तामा डुब्नु परेको छ ।
यसमा सबैभन्दा पहिलो दोषी हामी सहरवासी पनि छौ । सरकारको दोष पनि आफ्नो ठाउँमा होला । सरकार भन्छ तीन तल्लाभन्दा माथि घर नबनाउँनुस् । तर, हामी घर निर्माणको मापदण्ड विपरित पाँचतल्ले घर बनाउँछौ । घरभाडामा लगाउँछौ । त्यसो हुँदा घरमा जनसंख्या दोब्बर हुन्छ र त्यो जनसंख्या त्यही सडकमा आउँछ । किनकि, घरबाट निस्कने त त्यही सडक हो ।
नदी किनार मिचेर खोला छेउमा यत्रतत्र घर बनेका छन् । मापदण्ड विपरित अथवा नपुगेका ढल गाडिएका छन् । पछिल्लो चरणमा उपत्यकाका सडक खाल्डाखुल्डीका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले समय दिनुभयो । र प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीमा यी समस्या चाँडो सुल्झाउँनु पर्ने विषयमा केन्द्रित रह्योे ।
शासन प्रणाली तानाशाहीतन्त्र भएको भए प्रधानमन्त्रीकै आदेश पर्खनुपथ्र्यो तर यहाँ त त्यस्तो होइन । यसका बाबजुद पनि आदेश हुने गर्छ । त्यति मात्र हुँदा पनि काम हुँदैन । अब यसको गुनासो को सँग मात्रै गर्ने ? समस्या सबै तहमा उत्तिकै छ समस्याको सबैतहबाट समाधानको पहल गरिनु पर्छ । सबै दोष अरुलाई थोपर्नु भन्दापनि आफूले पनि सचेत नागरिकको हैसियतले सोच्नु जरुरी छ ।
साभार : नामी साप्ताहिक
प्रकाशित मिति: मगलवार, भदौ २६, २०७५, ०८:०९:००
चिकित्सा शिक्षामा महिलाको अपरिहार्य खाँचो
अति महंगो स्वास्थ्य सेवा र डा.केसीको माग
ज्यानै लिने जाडो महिना
मानव बेचबिखनमा थप जटिलता र चुनौती
शनिवार, पुष २१, २०७५ लुना पाैल
सामाजिक सेवामा ज्येष्ठ नागरिकको सवाल
शुक्रवार, पुष २०, २०७५ लुना पाैल
वैज्ञानिक सम्मेलन हुने शनिवार, फाल्गुन ११, २०७५ 3
बझाङ क्योकुशिन टिमलाई ७ स्वर्ण पदक
खाद्यान्न संकट टार्न सहयोगको अपिल
ठूलो मात्रामा राजस्व बाहिरिएकाले सामाजिक सञ्जालका कार्यालय नेपालमा खोल्ने
२७ बर्षपछि अष्ट्रियाका परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा
चामल विक्रि नभएर खाद्य संस्थानमै सड्न थाल्यो
गएरातिदेखि ब्राजिलसँगको सीमा नाका बन्द गरिएको घोषणा
बेटी बचाउ, बेटी पढाउ अभियान अन्तर्गत छोरी शिक्षा विमा कार्यक्रमको शुभारम्भ
चिकित्सा शिक्षामा महिलाको अपरिहार्य खाँचो न्यूजमिसाइल
बीमाप्रति जनचासो एस. श्रेष्ठ
अति महंगो स्वास्थ्य सेवा र डा.केसीको माग न्यूजमिसाइल
आर्मी, पुलिस, सशस्त्र प्रहरी केही नचाहिने सम्यन्त्रले खर्च बढ्यो शुक्रवार, आश्विन १९, २०७५
क्षमता भएकाहरुलाई काम गर्न (नाष्ट) मा वातावरण छ : प्रविधि संकाय प्रमुख रविन्द्र ढकाल शुक्रवार, आश्विन ५, २०७५
कारवाहीको भागिदार विचौलिया हुनै पर्छ शनिवार, भदौ ३०, २०७५
देशभक्ति शुक्रवार, फाल्गुन १०, २०७५
प्याराे सोमवार, फाल्गुन ६, २०७५
मेरो सपना सोमवार, माघ २८, २०७५
Dipak Kumar Bista
Contact no: 9802038000
©Sanchar Media Group Pvt. Ltd.- 2019 All rights reserved.